IZiko LamaNgqina KaYehova Livaliwe EKazakhstan
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
JULAYI 6, 2017
NgoJuni 29, 2017, inkundla yaseAlmaty, eKazakhstan, ihlawulise iZiko LamaNgqina KaYehova eliseKazakhstan yaza yathi makungasetyenzwa kweli Ziko iinyanga ezintathu. Esi sigqibo senziwe emva kokugqogqwa kweli Ziko, kutyholwa ngelithi abasemagunyeni bathi kwenziwa imisebenzi eyingozi kulo ibe kufuneka kufakelwe ezinye iikhamera ezintathu ukongeza kwezo ziyi-20 zilapho. UVladimir Voyevodin, osisithethi samaNgqina KaYehova esiseKazakhstan uthe: “Esi sigqibo singqongqo kakhulu kwezi zityholo zingenasihlahla. Siza kubhena kwesi sigqibo, ekubonakala ukuba senziwe ngenxa yokungafunwa kwenkonzo yethu.”
Ukungenelela Kukarhumente Kwizinto Ezenziwa KwiZiko LamaNgqina
Ngaphambi kwesigqibo esenziwe ngoJuni 29 nguN. M. Pakirdinov iJaji Yenkundla Yezithili Ezikhethekileyo, abasemagunyeni bagqogqe iZiko lamaNgqina besithi benza umsebenzi wabo. IZiko ligqogqwe ngoMeyi 17, 2017 Lisebe Lezokhuseleko Likarhulumente, amagosa angaphezu kwayi-30 namapolisa azifihle ubuso ebexhobe ngemipu. Athe afumene umyalelo wokugqogqa iindawo ezinokuba yingozi ebudeni be-Expo 2017, eqale kwikomkhulu laseAstana ngoJuni 2017. AmaNgqina azenzile zonke izinto ebekuthiwe mawazenze xa bekugqogqwa kwixesha elidlulileyo ibe azilungise ngokukhawuleza nezo bekuthiwe afanele azilungise xa bekugqogqwa ngoJuni 5, 2017.
NgoMeyi 17, 2017, kugqogqwa iZiko
Emva kokuba amaNgqina evile ukuba kuza kubakho iExpo 2017 eAstana, alungiselela indibano ekhethekileyo yeentsuku ezintathu eAstana eyayiza kuba nabantu abasuka kumazwe ahlukahlukeneyo. Kodwa ke abasemagunyeni baphazamisa ukuqeshwa kweendawo ezaziza kuba nale ndibano ibe izivumelwano zarhoxiswa. Ngoko iindwendwe eziyi-1 500 ezisuka eMerika naseYurophu namaNgqina alapho, zayibambela kwiZiko lalapho le ndibano. Kwiintsuku ezimbini zokuqala zale ndibano, amapolisa alibazisa iindwendwe engazivumeli ukuba zihambe kwiihotele ngoxa bona abasemagunyeni babehlola iimpepha zabaqhubi beebhasi. IZiko lafaka isikhalazo Kwiofisi Yomtshutshisi eseAlmaty. Nangona le ofisi ingazange iphendule, amapolisa awazange awaphazamise amaNgqina kusuku lwesithathu lwendibano. Kodwa ke, emva kweentsuku nje ezine indibano iphelile, inkundla yaseAlmaty yakhupha umyalelo wokuba kungasetyenzwa kwiZiko lamaNgqina.
NgoJuni 23, 2017, amapolisa aphazamisa iindwendwe ezize endibanweni
Ukusetyenziswa Kakubi Komthetho
Ukususela ngoDisemba 2012, urhulumente waseKazakhstan uye waqinisa ukunyhasha inkululeko yokunqula yamaNgqina KaYehova kwelo. Lo rhulumente uye wanyanzelisa amaNgqina KaYehova angaphezu kwayi-80 ukuba ahlawule imali eninzi ngenxa yokuba eshumayela engabhalisanga.
NgoJanuwari 2017, abasemagunyeni eKazakhstan babeke amaNgqina KaYehova amatyala amabini okwaphula umthetho ngenxa yokuba eshumayela ebantwini. NgoMeyi, uTeymur Akhmedov wabanjwa ngenxa yokuba eshumayela ibe ngoku ugwetywe iminyaka emihlanu entolongweni. Kwelinye ityala, amapolisa aphanda iNgqina ngesityholo sokubangela iinkonzo zizondane, kuba lanika umntu incwadi ekwakuthiwe iyingozi eRashiya.
Ngaba IKazakhstan Iza Kuwaphatha Ngendlela Aphathwa Ngayo AmaNgqina KaYehova ERashiya?
AmaNgqina KaYehova ebesoloko esiya KwiKomiti Ejongene Nezinto Zonqulo ukuze athethe ngelungelo lawo lokukhonza ngokukhululekileyo kodwa awakhange aphumelele. Kodwa ke, ngoncedo lweOfisi Yomtshutshisi Oyintloko, iNkundla Ephakamileyo yaseKazakhstan iye yavuma ukuxoxa ityala likaAndrey Korolev, iNgqina likaYehova ebelibanjwe ngenxa yokushumayela kwindawo kawonke-wonke. NgoJuni 11, 2017, iNkundla imfumanise engenatyala uMnumzan’ uKorolev, isithi ukushumayela kwiindawo zikawonke-wonke ngenxa yeenkolelo zakhe kuyakhuselwa ngumthetho wenkululeko yonqulo. Nangona iOfisi Yomtshutshisi Oyintloko iye yawaqinisekisa amaNgqina ukuba iza kusisasaza esi sigqibo, iinkundla ezingaphantsi ziye azafuna ukwenza ngokwesi sigqibo ibe zisawabamba amaNgqina kuba zisithi “awabhalisanga ukuba ashumayele.”
UGregory Allen, Isekela Lomcebisi Oyintloko wamaNgqina KaYehova uthe: “Phezu kwazo nje ezi ngxaki zomthetho zakutshanje, sinethemba lokuba iinkundla ezingaphantsi nabasemagunyeni baza kusamkela isigqibo esenziwa yiNkundla Ephakamileyo ngoJuni 1, 2017. Kubuhlungu ukubona ukuba iKazakhstan yenza kanye njengeRashiya ngokutyhola amaNgqina ngezityholo ezingenasihlahla ukuze ingawuthobeli umthetho wehlabathi ovumela abantu ukuba bakhonze ngokukhululekileyo. Iyasikhathaza into yokuba isigqibo esenziwe ngoJuni 29 sokuyekisa ukusebenza kweZiko singqongqo kakhulu ibe sifuna kwenziwe ubulungisa kwisibheno sethu.”
AmaNgqina KaYehova ehlabathini lonke akhathazekile kuba ezi ngxelo zakutshanje zibonisa ukuba abasemagunyeni bayaqhubeka nokuvala amaNgqina eKazakhstan, besenza into efanayo naleyo yenziwa eRashiya.
Urhulumente WaseKazakhstan Uvala Isebe LamaNgqina KaYehova